भगवान श्रीकृष्णको गाउँमा: हैट, कहाँ गए सोह्र सय गोपिनीहरू ? | usa
PoorBest Written by Pradeep Pariyar Thapa Magar	Thursday, 25 August 2016 12:45	View Comments
Special: न्यू योर्क- म भगवान श्रीकृष्णको जन्मस्थल भनेर चिनिने मथुरामा उनी जन्मेको ठाउँ हेर्न दुई पटक पुगेकोछु- सन् २००२ र २०१५ मा। त्यहाँ पुग्दा म रोमान्चित र रोमान्टिक पनि बन्छु- भगवान श्रीकृष्णले सोह्र सय गोपिनीहरूसंग यमुना नदीको किनारामा रौसिएको क्षण परिकल्पना गरेर। उनका ८ श्रीमती पनि थिए। रौसिनु र श्रीमती नै बनाउनु फरक कुरा हो। हैट, ८/८ वटा श्रीमतीहरू बनाउनु चैं उनले गलती नै गरेका हुन्। उनलाई नौनी-दही चोरको रूपमा पनि मायाले बोलाईन्छ। बिचरा, बालख छँदा दही चोरेका हुन्। हामीले पनि वाल्यकालमा दहीमात्र हैन अरू धेरै थोक चोरेकाछौं भो। यो त माफ़ पाईन्छ लौ।
भगवान श्रीकृष्णको जन्मस्थल मथुरा सामान्य छ, धुलोमैलो छ अर्थात साधारण गाउँले बजार जस्तो। मन्त्रि या सांसदको गाउँमा बिकास नपुगे जस्तो, उनलाई विश्वले मान्नी, जन्मस्थल चैं गएगुज्रेको। तर उनले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धर्मग्रन्थ 'भागवत गीता' मा अर्जुनलाई दिएको कुटनैतिक र रणनैतिक शिक्षाको महत्ता अपरम्पार छ। उनी र उनको बिचार अजम्बरी (Ageless) छ:"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥४-७॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥४-८॥"
The meaning of these two slokas is"Whenever there is decay of righteousness, O Bharata,And there is exaltation of unrighteousness, then I Myself come forth ;For the protection of the good, for the destruction of evil-doers, For the sake of firmly establishing righteousness, I am born from age to age."ह्यापी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी !